Asam-panjakana : Miara-miasa amin’ny banky ny minisiteran’ny Filaminam-bahoaka -
AccueilSongandinaAsam-panjakana : Miara-miasa amin’ny banky ny minisiteran’ny Filaminam-bahoaka
Asam-panjakana : Miara-miasa amin’ny banky ny minisiteran’ny Filaminam-bahoaka
03/03/2018 admintriatra Songandina 0
Ao anatin’ny fanamafisana ny fiarovana ny olona sy ny fananany. Tontosa omaly, tetsy amin’ny minisiteran’ny Filaminam-bahoaka tetsy Anosy ny fanaovan-tsonia fiaraha-miasa eo amin’ny banky sy ny minisiteran’ny Filaminam-bahoaka. Fifanarahana niarahan’ny mpanara-maso ankapobeny ny polisy Eric Michel Wouli soumah Idrissa sy ny tale jeneralin’ny Bni Madagascar, Alexandre Mey. Ny fifanarahana dia mametra ny fahafahan’ireo mpiasam-panjakana eo anivon’ny minisiteran’ny Filaminam-bahoaka hisitraka ireo tolotra manokana omena ny mpiasam-panjakana sy ny tombontsoa mifanaraka amin’izany. Ao anatin’izany ny « tolotra mpiasam-panjakana » sy ny « findramam-bola Tosika » ahafahan’ireo mpiasan’ity minisitera ity mindrana vola amin’ireo tetikasa manokana hananan’ny tsirairay.
Sehatra iray ihany koa io ho an’ny Bni Madagascar hanolo-tanana ireo zazavaon’ny polisim-pirenena, izay hotantanana manokana aorian’ny fianarana ataon’izy ireo ao amin’ny ENSP sy ny ENIAP amin’ny fanokafana kaonty sy ny findramam-bola amin’ny fametrahana azy ireo amin’ny asany.
Nandritra io lanonana fanaovan-tsonia io, dia nanamarika ny roa tonta fa fiaraha-miasa ahitan’ny roa tonta tombontsoa no tanjona, ary fanamafisana hatrany ny fiaraha-miasa eo amin’ny sehatra tsy miankina sy ny fanjakana.
Miparitaka ny basy. Tsy mahagaga raha mirongatra izay tsy izy ny fanafihana mitam-piadiana, na eto an-drenivohitra, na ny any amin’ny faritra. Basy kalaky iray, PA, Big Boss miampy Revolver sy bala miisa dimy ambinin’ny folo ...Tohiny